पर्वत अस्पतालमा कोरोनाका विरामीको चाप, नयाँ विरामी भर्ना गर्ने बेड छैनन् – Parbat News
पर्वत अस्पतालमा कोरोनाका विरामीको चाप, नयाँ विरामी भर्ना गर्ने बेड छैनन्
२९ वैशाख, पर्वत । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विरामीको संख्या ह्वातै बढेपछि देश भर जस्तै पर्वतमा पनि वेडको अभाव हुन थालेको छ । जिल्लामा रहेको एक मात्र सरकारी अस्पताल पर्वत अस्पतामा वेडको अभाव हुन थालेको हो । कुश्मा बजारमा रहेको सरकारी अस्पतालमा १० बेड तयार गरिए पनि ति सवै वेडमा विरामी भर्ना भएका छन् ।
संक्रमण पुष्टि भएर लक्षण देखिएका विरामीलाई अहिले अस्पतालले भर्ना गरीरहेको अस्पतालका निमिक्त प्रमुख डा. ढुण्डिराज पौडेलले जानकारी दिए । उनले अस्पतालले कोभिडका लागि तयार गरेको सवै शैया भरिएका कारण वेडको अभाव रहेको समेत बताए ।
अस्पतालका चिकित्सकहरुले विरामीलाई कोभिड वार्ड बाहेकका वेडहरुमा समेत राखेर उपचार गरीरहेका छन् । अस्तापलमा भर्ना भएका विरामीहरुलाई अक्सिजनको आवश्यकता परेको छ । अक्सिजन सहित भर्ना भएका विरामीहरुको सामान्य प्रकारको उपचार सेवा अस्पताल भए पनि आइसियू र भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्ने भएमा तत्काल रिफर गर्नुपर्नेछ । अस्पतालमा भेन्टिलेटर र आईसियू प्रदेश सरकारले ब्यवस्थापन गरे पनि जनशक्ति भने पठाएको छैन् । प्रदेश सरकारले उपकरण ब्यवस्थापन गरे पनि जनशक्तिको ब्यवस्थापन नहूँदा सामाग्री त्यसै थन्किएको डा. पौडेलको भनाई छ ।
विरामीको चाप बढ्दै गएपछि अस्पतालले तत्कालै २० शय्या थप्ने तयारी गरेको छ । हाल अस्पतालमा १२ जना कोभिडका विरामीले उपचार गराईरहेको डा. पौडेलले बताए । उनका अनुसार ८ जना लक्षण सहित गम्भिर प्रकृतिका विरामी छन् । बाँकी सामान्य रहे पनि उनीहरुलाई भर्ना गरेर उपचार गरिएको उनको भनाई छ ।
अस्पतालका अध्यक्ष गोविन्द पहाडीले थप शैयाको ब्यवस्थापन गरेर उपचारको प्रयास गरिने बताए । उनले जनशक्ति र उपकरण ब्यवस्थापनमा स्थानीय
पालिकाहरुले सहयोग नगरेको बताएका छन् । जनशक्ति ब्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले समेत तत्परता नदेखाउँदा उपचारमा समस्या भएको उनको भनाई छ ।
Slider News • ताजा अपडेट • मुख्य समाचार • राष्ट्रिय / देश • विशेष • समचार
दुर्लुङ पहिरोको एक बर्ष : मृतकको सम्झना गर्दै दुर्लुङबासी
डेढ महिना पछि पर्वतमा निषेधाज्ञा खुकुलो
मुख्य समाचार • राष्ट्रिय / देश • विशेष • समचार
नरोत्तम बैधलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न एमाले नेता गिरीको माग
यी हुन् पर्वतमा कोरोना संक्रमणका उच्च जोखिम स्थानहरु
स्यानीपोखरी आधारभूत विद्यालयको विषयमा भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको भन्दै विद्यालयको आपत्ति
आजबाट पर्वत जिल्ला भर निषेधाज्ञा
एण्ड जि मिडियाद्धारा संचालीत
द. न.: 699/074/075
कुनपा ६ , धनेश्वर चोक, पर्वत,
धेरै प्रतिकृया आएका
प्रेम गर्नेहरुका लागि जनवरी ९ किन खतरनाक हुन्छ ?
उच्च अदालतका ८२ न्यायाधीश नियुक्तिमा यसरी हुँदैछ भागबण्डा
Copyright © 2017-2021 Parbat News. Website designed by Dhaulagiri IT.